Isikhokelo sokhetho lweeMill Mill-iindaba-VSmile Co., ltd
Isikhokelo soKhetho seMill
Ixesha: 2020-11-25 I ngxelo:101
ICEBISO NGOKUKHAWULEZA FOR ABASHUMI KOMATSHINI WOKUGCINA AMAZINYO
UKUTSHANTSHA IZIXHOBO ZOKUGQIBA Ekunene NEZINTO EZILUNGILEYO
Soloko ukhetha ezona zixhobo zibalaseleyo kwezona ziphumo zibalaseleyo
Emva kokukhetha imathiriyeli ye-mUmsebenzi wokugula, inani lemibuzo livela: Zeziphi izixhobo ekufuneka ndizisebenzisele i-zirconia, i-wax, i-PMMA, okanye izinto ezinzima njengee-resins ezidibeneyo kunye ne-lithium silicates? Zingaphi iiyunithi endinokuzisila phambi kokuba kufuneke kutshintshwe ezo zixhobo? Ngaba zonke izixhobo zenziwe zilingana kwaye ziya kusebenza nomgodi wam wangoku? makugxilwe ngokukodwa kuthotho lweVsmile lokugaya.
IiBhasari zokuDibanisa iiCarbide (Akukho sigqubuthelo / i-PMMA)
Sebenza kakuhle nge-PMMA, i-wax kunye nezinye izinto ezithambileyo.
Ngokwendalo, xa usenza isigqibo ngesixhobo sokugaya, utyekelo kukuxhomekeka kwinketho efikeleleke ngakumbi, enje nge-carbide bur. Izixhobo zeCarbide zisebenza kakuhle nge-PMMA, i-wax kunye nezinye izinto ezithambileyo, ngelixa zisabonelela ngobomi obude Nangona kunjalo, ukucoca izixhobo zakho ze-carbide rhoqo kufuneka kuqinisekiswe ukusebenza ngokukuko. Ngenxa yokuba i-wax eguqulweyo kunye nezinto ze-PMMA zinokubambelela kwimirhubhe xa ipholisa, kubalulekile ukuba ususe naziphi na izinto ezishiyekileyo kwincam ye-bur emva komsebenzi ngamnye. Ewe kunjalo, ukuba usebenza ngesixhobo esifana ne-zirconia usebenzisa isixhobo se-carbide, yazi ukuba ukwenza njalo kuya kunciphisa ixesha lokuphila kwesixhobo.
IiBhasari zokuDibanisa iDiamond (DC)
Velisa iiprothini ezikumgangatho ophezulu ngemigca esemagqabini ebalaseleyo kwaye wandise ixesha elide lokusebenzisa izixhobo.
UDAYIMANE NGUYE UMHLOBO OBALASELEYO WOBUCHWEPHESHE BELABHU
Ke, ukuba i-carbide bur ayilolona khetho lufanelekileyo lokugaya i-zirconia, loluphi uhlobo lwesixhobo esifanelekileyo emsebenzini? Sicebisa isixhobo sedayimane. Sebenzisa isixhobo sedayimane akusayi kunceda kuphela ekuveliseni izithsaba ezikumgangatho ophezulu, iibhlorho, kunye nokufakwa kwimigca ebalaseleyo yomgama, iya kwandisa ubude bezixhobo ngokunjalo.
Iibhondi zeCarbon Burs (DLC)
Ixabiso eliphezulu kakhulu ngexabiso lokukhuphisana
Umhlobo wam usebenzisa i-diamond yokugaya i-burs yokugaya yonke into, kwaye undibuza isizathu sokuyeka ukusebenzisa kungekudala. Ndithe ekuphela kwento lixabiso, ezo zinto zi-hybridi zebhasari ziyakwazi ukuhambelana kakuhle nemfuno yakho yokugaya i-zirconia ngendleko eziphantsi kakhulu. yokwenza izinto ezithambileyo sisiqwenga sekeyiki.
IiReins ezidityanisiweyo, iiCeramics zeHybrid
I-Vsmile ibonelela ngeseti yezixhobo ze-hybrid (I-Emax / isinyithi)ilungele isabelo.
Izixhobo zokugaya iVsmile ezikhoyo ukuba zithengwe kwivenkile ekwi-intanethi ye-aliexpress ziya kuzisa umgangatho owenziwe ngesandla kunye nokuphila ixesha elide olikhangelayo ngaphandle kwento esetyenziswayo. Unokulindela iziphumo ezibalaseleyo, ukuya kuthi ga kumaxesha ali-10 wemveliso enkulu kwiseti nganye.
I-PREV: Izikhokelo zeLebhu yamazinyo Ukukhetha ifom efanelekileyo yeZirconia
OKULANDELAYO : Ukuphakanyiswa kweVsmile yokugaya bur